धर्म सन्तान तस्करी जारी, ९ वर्षमा ६ देशमा १३७ बालबालिकाको तस्करी - Pahilo Click
धर्म सन्तान तस्करी जारी, ९ वर्षमा ६ देशमा १३७ बालबालिकाको तस्करी
काठमाडौँ: नौ वर्षयता ६ मुलुकमा २० बालबालिका धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाएर लगिएको सरकारी अभिलेख छ। ती मुलुकका तथ्यांक जोड्दा त्यही अवधिमा १ सय ५९ नेपाली बालबालिका त्यहाँ धर्मसन्तानका रूपमा लगिएका छन्। बढी भएका १ सय ३७ जना कसरी गए ? यसले धर्म सन्तानका नाममा नेपालबाट बालबालिका तस्करी भइरहेको पुष्टि हुन्छ।
यसअघि नेपालले सन् २००९ मा हेगमा भएको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बालबालिकाको संरक्षण र सहयोगसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षरसमेत गर्‍यो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा आकाश क्षेत्रीले लेखेका छन् ।
त्रिविको हदैको लापरवाही: पहिले पास भनेर दिइएको ट्रान्सक्रिप्ट एक वर्षपछि फेल !
ठमेल सडक महोत्सव असोज ११ गते, हिलो र धुलो सडकमा कस्ता पर्यटक ल्याउँने हो सरकार ?
मन्त्री त्रिपाठी सम्हाले कार्यभा , भने-निजामती क्षेत्रमा नीतिगत र संरचनागत समस्या छ
रहस्यमयी चुहाडी पोखरी: जहाँको पानी नमिसाइ खाना पाक्दैन, माछा मार्दा दुई सैनिकको मृत्यु !